China Sibona iglasi Pipe mveliso kunye nabathengisi | Lianggong
Ipetroli yombhobho wetololi yitonela elakhiwe phantsi komhlaba esixekweni, elidibanisa igalari yemibhobho yobunjineli efana namandla ombane, unxibelelwano ngomnxeba, igesi, ubushushu kunye nonikezelo lwamanzi kunye nenkqubo yokuhambisa amanzi. Kukho izibuko lokuhlola elikhethekileyo, ukuphakamisa izibuko kunye nenkqubo yokubeka iliso, kunye nocwangciso, uyilo, ulwakhiwo kunye nolawulo lwenkqubo yonke idityanisiwe yaphunyezwa. Sisiseko esibalulekileyo kunye nendlela yokuphila yedolophu yokuqhuba kunye nolawulo. Ukulungela iimfuno zentengiso, inkampani yethu iphuhlise inkqubo yetroli yombane ye-TC-120. Yimodeli entsha yetroli edibanisa i-ergonomically inkqubo ye-formwork kunye netroli kubunye. Iifomwork zinokufakwa kwaye zisuswe ngokulula ngokulungisa umtya wokujija wetroli, ngaphandle kokudibanisa yonke inkqubo, ngaloo ndlela kufikelelwe kwisiseko sokhuseleko esikhuselekileyo nesikhawulezayo.
Inkqubo yetroli yahlulahlulwe yinkqubo yokuhamba ezenzekelayo kunye nenkqubo yokuhamba ngokuzenzekelayo.
Inkqubo yokuhamba ye-1.Semi-oluzenzekelayo: Inkqubo yetroli ine-gantry, inkqubo yenkxaso yefom, inkqubo yokuphakamisa i-hydraulic, inkxaso yohlengahlengiso kunye nevili lokuhamba. Ifuna ukurhuqelwa phambili ngesixhobo sokutsala esinjenge-hoist.
Inkqubo yokuhamba ezenzekelayo ye-2: Inkqubo yetroli ine-gantry, inkqubo yenkxaso yefom, inkqubo yokuphakamisa i-hydraulic, inkxaso yohlengahlengiso kunye nevili lokuhamba ngombane. Ifuna kuphela ukucofa iqhosha ukuya phambili okanye ngasemva.
Inkqubo yetroli yegalari yombhobho ihambisa yonke imithwalo eveliswe yikhonkrithi kwiitroli zetroli ngenkqubo yenkxaso. Umgaqo-siseko ulula kwaye amandla asengqiqweni. Inempawu zokuqina okukhulu, ukusebenza ngokukuko kunye nomba wokhuseleko oluphezulu.
Inkqubo yetroli yegalari yombhobho inendawo enkulu yokusebenza, ekulungeleyo ukuba abasebenzi basebenze kunye nabasebenzi abanxulumene nabo batyelele kwaye bahlole.
3.Kukhawuleza kwaye kulula ukuyifaka, iindawo ezimbalwa ezifunekayo, akukho lula ukulahleka, kulula ukuzicoca kwindawo
4. Emva kwendibano yexesha elinye yenkqubo yetroli, akukho mfuneko yokuyidibanisa kwaye inokusetyenziswa kwakhona.
Inkqubo yefololi yombhobho wegalari inezibonelelo zexesha elifutshane lokwakhiwa (ngokwemeko ethile yesayithi, ixesha eliqhelekileyo malunga nesiqingatha sosuku), abasebenzi abancinci, kunye nokubuya kwexesha elide kunokunciphisa ixesha lokwakha kunye Iindleko zabasebenzi ngokunjalo.
Emva kokungena ebaleni, jonga izixhobo ukuqinisekisa ukuba izinto ziyahambelana noluhlu lokuthenga.
Phambi kokufaka inkqubo yetroli yombhobho ye-TC-120, emazantsi wombhobho kunye neendonga zesikhokelo kumacala omabini kufuneka zigalelwe kwangaphambili (ifomwork kufuneka isongelwe nge-100mm)
Ukulungiswa kwesiza ngaphambi kofakelo
3.Ukufakwa komtya osezantsi
Inkxaso yohlengahlengiso, ivili lokuhamba kunye nenkqubo yokunyusa i-hydraulic zidityaniswe kumtya osezantsi. Beka umkhombe wokuhamba ngokophawu lokuzoba ([i-16 yentsimbi yejelo, elungiswe sisiza), kwaye wandise inkxaso yohlengahlengiso ngaphaya kwenkqubo yokuphakamisa i-hydraulic kunye nevili elihambahambayo, fakela umtya osezantsi odityanisiweyo. Njengoko kubonisiwe ngezantsi:
4. Ukunyuka kwegantry
Qhagamshela isibambo somnyango kumtya osezantsi. Njengoko kubonisiwe ngezantsi:
Udibaniso lomtya osezantsi kunye neganti
5.Ukufakwa kwemitya ephezulu kunye nefomwork
Emva kokuqhagamshela i-gantry kwi-stringer ephezulu, emva koko uqhagamshele i-formwork. Emva kokuba ifomwork esecaleni ifakelwe kwaye ihlengahlengisiwe, umphezulu kufuneka utyibilike kwaye ucabalele, amalunga akhululekile, kwaye ubukhulu bejiyometri buhlangabezana neemfuno zoyilo. Njengoko kubonisiwe ngezantsi:
Ukufakwa komtya ophezulu kunye nefomwork
6.Ukufakwa kwenkxaso yeefom
Dibanisa i-brace yomnqamlezo yefomwork kunye ne-diagonal brace ye-gantry kwifomwork. Njengoko kubonisiwe ngezantsi:
Ukufakelwa komnqamlezo onqamlezileyo wefomwork ephezulu kunye nokudityaniswa kwe-gantry
7.Ukufakwa kwemoto kunye nesekethe
Faka inkqubo ye-hydraulic motor kunye nevili lokuhamba ngombane, yongeza i-46 # hydraulic oyile, kwaye uqhagamshele isekethe. Njengoko kubonisiwe ngezantsi:
Ukufakwa kweemoto kunye nesekethe
Egqithileyo I-Hydraulic Tunnel Linning Trolley
Okulandelayo: H20 Timber Beam ekubhalwe formwork
Umgangatho ophezulu weFomwork